Excellent Unity မှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော YUFL Building - BaganMart
Kitchen Room ( Light Box Decoration )
Excellent Unity မှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော YUFL Building
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ : 1 Case(s)
Model : Four Storeyed
လုပျငနျးအမညျ : Excellent Unity Co.,Ltd. Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 95-1-556378 , 09-5504245, 09-5018293
Apply : Student Class Room
Desgin : Customize
Finish : 80%
YUFL (၄)ထပ်နိုင်ငံခြားသားစာသင်ဆောင်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း ၈၀%ပြီးစီးမှုအခြေနေဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ လေးစားအပ်ပါသော လူကြီးမင်းများခင်ဗျား
ကျွန်တော်များ Excellent Unity Co.,Ltd. ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် မြေယာတိုင်းတာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အိမ်အတွင်းအပြင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်း ၊ အကြီးစား အဆောက်အဦးမွမ်းမံခြင်း နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ၊ စီမံကိန်းများအား အစမှ အဆုံးအထိ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်များ Excellent Unity Co.,Ltd. အနေဖြင့် ပြင်ပပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ အပြင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်း လုပ်ကိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(၄)ထပ်နိုင်ခြားသားစာသင်ဆောင်၊ တောင်ငူတက္ကသိုလ်ပင်မဆောင်၊ Creative Media Technologies Center တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ၊ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲ မှု ပညာကောလိပ် ပင်မဆောင် နှင့် စာသင်ခန်းများ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ၊ အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ် ပင်မဆောင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား လည်းကောင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ မီးသတ်စခန်းများ တည်ဆောက်ရေး နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းကျောင်းများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား လည်းကောင်း၊ မီးရထား ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ လှိုင်သာယာ - ပုသိမ် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း တံတားများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်များ Excellent Unity Co.,Ltd. အနေဖြင့် တန်ဖိုးထား လေးစားရပါသော လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ပေးအပ်မှုအား စောင့်စားလျက်ရှိပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေး အပ်ပါသည်။
၀ယျယူလိုသညျ့ အရအေတှကျ Case(s)
For Excellent Unity မှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော YUFL Building
Approximate Quantity Needed Case(s)
May I get the quotation for "Excellent Unity မှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော YUFL Building" ?